Knowledgebase Archives - Page 54 of 55 - Saturngod
Excel 2007 တွင် မြန်မာ ဂဏန်းပေါင်းနှုတ်မြှောက်စားနိုင်သည်
Posted on Updated April 29, 2007 by saturngod
ဝမ်းသာစရာသတင်းပါ…တကယ်လုပ်လို့ရပါတယ်…ကျွန်တော် စမ်းကြည့်ပြီးပြီ…Microsoft က မြန်မာစာ Unicode ကို လစ်လျှူမရှုထားပါဘူးဆိုတာကို တွေ့လိုက်ရတာပဲ…Font ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာစာ အတွက် Micrsoft က ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး…ဒါပေမယ့် unicode font တွေတော်တော်များများထပ်ထည့်ထားတာကို windows vista မှာတွေ့ရပါတယ်…ကဲထားလိုက်ပါ.. ဒါတွေက ကျွန်တော်အပိုင်းမဟုတ်ဘူး…excel 2007 မှာ၁ ကို အလိုလို 1 လို့သိတယ်…၂ ကိုလည်း သူက အလိုလို2လို့သိတယ်…မြန်မာဂဏန်း အနှုတ်လေးရေးလို့ရပါတယ်…စာရင်းဇယားတွေကို မြန်မာလိုလုပ်နေသူတွေ ပြောင်းသုံးကြည့်ဖို့အကြံပေးပါရစေ…hardware requirement က သာမန် စာစီစာရိုက်ဆိုင်တွေ သုံးတဲ့ ပုံစံလောက်တော့မရဘူး…grahic card 64 MB လောက်တော့ အနည်းဆုံးရှိရမယ်..memory 256 လောက်မှ ရမယ်…နောက်ပြီး windows xp အထက်ဖြစ်ရမယ်…တောင်းတာလေးတွေ များပေမယ့် မဆိုးဘူးဗျ…
Your Freedom Config
Posted on Updated April 15, 2007 by saturngod
ကိုမိုးတိမ်ရေးထားတဲ့ topic လေးကနေ ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါတယ်.. ကျွန်တော် Your-freedom Software မသုံးတတ်သေးသူတွေအတွက် ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို တင်ပြပေးချင်ပါတယ်. Freedom Software ကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Freedom Account ရှိရပါမယ်။Account မရှိသူများ ဤနေရာတွင် Request လုပ်ပါ။ Account ရှိသူများ ဝိုင်းဝန်း ပြုလုပ်ပေးကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဦးဆုံးပထမ Your-freedom Software ကို Download အရင်ချပါ။ Download Your FreedomFull Latest Version ပါ။ File Size တော့နည်းနည်းကြီးမယ်။ Dial-up User တွေအတွက် အဆင်သိပ်မပြေပါဘူး။ 28 MB လောက်ရှိတယ်။ Download ပြီးရင် Install လုပ်ရပါမယ်။ Install လုပ်ပုံကိုတော့ မတင်ပြတော့ပါဘူး။ အားလုံးလုပ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ […]
တိုးတက်လာသော မြန်မာနိုင်ငံ Forum များ
Posted on Updated March 31, 2007 by saturngod
ကျွန်တော် အခုတလော internet တွေမှာ မြန်မာ Forum တော်တော်များများကိုတွေ့လာရတယ်ဗျ….ကျွန်တော်တို့ အရင်တုန်းကဆိုရင် Planet Forum တစ်ခုတည်းလို့ထင်ရလောက်အောင်ပါပဲဗျာ….အခုတော့ မဟုတ်ဘူး… Forum တွေက ပေါများလာလိုက်တာ.. အခုလို Forum တွေများလာတာကို ကျွန်တော်ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ…ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တွေ့ရတာလေးတစ်ခုရှိတယ်…အဲဒါဘာလဲဆိုရင် Forum တွေဟာ တစ်ခုနဲ့ ဟာကွဲပြားမှုသိပ်မရှိလှဘူး…ဒါပေမယ့် Forum တိုင်းမှာ သူတို့ ဦးတည်ချက်လေးတွေ ရည်ရွှယ်ချက်လေးတွေရှိကြတယ်..အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားထားတယ်…ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်… ဒါပေမယ့် အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းအတွက် တည်ထောင်ထားတဲ့ Forum ကရှားပါတယ်..အကြောင်းအရာပေါင်းမြောက်များစွာရောထွေးထားတဲ့ Forum တွေကိုတွေ့ရတယ်…ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြောင်းတစ်ခုတည်း (ဥပမာ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ) ဆွေးနွေးဖို့လုပ်ထားတာရှားပါတယ်..Forum တိုင်းမှာ အကြောင်းအရာ အစုံအလင်ထည့်ထားပါတယ်…တဖက်က စဉ်းစားရင်လည်းကောင်းပါတယ်….ရသအစုံရတယ်… ဗဟုသုတရတာပေါ့…တဖက်က ကြည့်ပြန်တော့လည်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို သိနိုင်ချေ ရာခိုင်နှုန်းနည်းတယ်…ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဆွေးနွေးတာရှားပါတယ်…မေးချင်တဲ့ အပိုင်းကို […]
Spam Mail ပို့မယ်..
Posted on Updated March 26, 2007 by saturngod
စာကျက်လို့မရမဲ့အတူတူဆိုပြီး ဒါလေးကို ရေးလိုက်တာ…Spam Mail ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ဆီကို ကိုယ့်အတွက် အသုံးမဝင်တဲ့စာတွေ…ကြောငြာတွေရောက်လာတာလို့ဆိုလို့ရတယ်…လူတွေက Spam Mail တွေဘာကြောင့် ပို့ရတာလဲဆို အဓိကက ကြော်ငြာအတွက်…နောက်ပြီး အပျော်သဘောပေါ့…ဒီထက်ဆိုးလာရင် Spam Mail ကို တစ်စောင်ပဲမပို့ပဲ အစောင်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုပို့တတ်ပါသေးတယ်… Spam Mail ပို့မယ်..ဘယ်လိုပို့မလဲ…ကိုယ့် Email Address နဲ့ပို့မလား…ပို့ရင်တော့ ကိုယ်သေမှာပဲ…ကိုယ့်ဆီပြန်ပို့ရင် ပြသနာ…ကိုယ့်ဆီလည်း ပြန်မပို့ချင်ဘူး…ကိုယ်ပို့တယ်ဆိုတာလည်း မသိချင်ဘူး…ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ…. မပူပါနဲ့…SMTP Email Server တွေရဲ့ အားနည်းချက်နဲ့ လုပ်တာပေါ့…SMTP ဆိုတာ mailပို့ဖို့ အတွက်သုံးတဲ့ Server ပါ…Mail ပို့ဖို့က ဘာလိုလဲဆို ဘယ်သူ့ဆီပို့မှာလဲ…Subject ကဘာလဲ…Message ကဘာလဲ..ဒါပဲလိုတာ…ဘယ်သူကပို့လိုက်တာလဲဆိုတာက optional ပါ…Mail မရောက်ဘူးဆိုတာ ပြန်လာဖို့ပဲသုံးတာ…အဲတော့ ဒါကိုအသုံးချလို့ရမယ်…ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ…မပူပါနဲ့…VB6 နဲ့ရေးထားတဲ့ Program လေးရှိပါတယ်…opensoure ပါ….VB6 […]
Posted on Updated March 8, 2007 by saturngod
အဲဒီအကြောင်းကို Internet Journal မှာဖတ်မိလိုက်တော့ ဒီ Topic လေးကို ရေးမိလိုက်တာ…အဲဒီက အကြောင်းလေးတွေကို reference လုပ်ထားပါတယ်..ကျွန်တော်တို့မှာ E-mail ကိုစွဲလမ်းနေတယ်လို့ထင်တယ်…ကျွန်တော်တို့မှာ E-mail ကို တစ်နေ့ကို တစ်ခါထက်မက စစ်နေပါတယ်…အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လည်း E-mail ကို တစ်နေ့ကို ၃ ခေါက်လောက်စစ်ဖြစ်တယ်…ဒါတောင် အနည်းဆုံးပါ…တစ်ခါတစ်လေ ဘယ်နှစ်ခေါက်မှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး..ဘာဖြစ်လို့လည်းဆို သူငယ်ချင်းတွေဆီက စာလာလာတတ်လို့ပါ…တစ်ခါတစ်လေ Inbox ထဲမှာ စာတစ်စောင်မှ မရှိရင် ဘယ်လိုမှန်းမသိဘူး…နည်းနည်းဟာတာတာဖြစ်သွားတယ်…ဘာဖြစ်လို့မှန်းမသိဘူး….အဲ Inbox ထဲမှာ စာတွေက ၃ စောင်လောက်ဆိုရင်ပျော်သွားရော…အဲဒီလို ပျော်သွားခြင်းက ကျွန်တော်တို့ကို စွဲလမ်းခြင်းရောပါဖြစ်စေတာပဲ…ကျွန်တော်တို့ ခရီးသွားတယ်ဆိုရင်တောင် E-mail စစ်လို့ရနိုင်မယ့် နေရာလေးကို ရှာတတ်ကြပါတယ်…ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ စာတွေမျှော်နေတတ်ပါတယ်…အဲဒီလို စွဲလမ်းမှုဟာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်…တနည်းအားဖြင့် ဒါဟာ စိတ်ရောဂါ တစ်မျိုးလို့ထင်တယ်…ဒါကြောင့် ကျွန်တော် […]
Youtube, Metacafe Video တွေကို Download ချမယ်…
Posted on Updated March 5, 2007 by saturngod
ကျွန်တော်တို့ Youtube video တွေ Download ချလို့ရပါတယ်..http://javimoya.com/blog/youtube_en.php ကနေပြီးတော့ download ချလိုက်ပါ…အဲဒီwebsite မှာ youtube video ရဲ့ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ Address ကို ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ…ပြီးရင်သင့်ကို Link တစ်ခုပေးပါမယ်…အဲဒီ Link ကို Download Manager တစ်ခုခုကနေ ချလိုက်ရုံပါပဲ…သူကတော့ getvideo ဆိုပြီး extension မရှိပဲ save လုပ်ပါလိမ့်မယ်..အဲဒါကြောင့် download ချတဲ့ အခါမှာ အနောက်မှာ .flv ဆိုတာလေးထည့်ပေးလိုက်ပါ..getvideo.flv ဆိုပြီးတော့ပေါ့….flv ကို MPEG ပြောင်းဖို့ကတော့ Total Video Converter ကနေပြောင်းလိုက်ပါ… Youtube ကို ပုဂံက ပိတ်ထားပါတယ်.. သူ့လိုမျိုး Metacafe ရှိပါတယ်.. www.metacafe.com ပါ…http://javimoya.com/blog/youtube_en.php မှာ […]
Posted on Updated February 21, 2007 by saturngod
ကျွန်တော့်ကို တော်တော်များများမေးတယ်ဗျ…. Virus ရေးတတ်လားတဲ့… ကျွန်တော်ကတော့ ပြောတာပေါ့…ရေးတတ်တာပေါ့… ဘယ်လိုရေးလဲ လို့ထပ်မေးပြန်ရော… Window ရဲ့ အားသာချက်တွေက Window ရဲ့ အားနည်းချက်တွေပဲလေ… သူ့မှာပေးထားတဲ့ Feature တွေကနေ တဆင့် virus ကို အလုပ်လုပ်သွားရတယ်.. တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဗျာ… Virus ဆိုတာ windows ရဲ့ အားနည်းချက်ကို အသုံးချသွားတာပဲ… Windows က လုပ်ခွင့်ပေးလို့လုပ်လိုက်တာ… အဲဒါကြောင့် ကြိုက်တဲ့ Programming နဲ့ရေးရတယ်… Windows အကြောင်းနားလည်ရင်ပြီးရော…အဲလို ပြောလိုက်တော့.. သူတို့တွေလည်း မသိတော့ဘူး…ရှုပ်သွားရော… ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လိုရှင်းပြရှင်းပြ Logic ပဲရှင်းပြနိုင်တယ်… source code လိုက်ရှင်းပြဖို့ အခွင့်မသာခဲ့ဘူးဗျ… အခု ကျွန်တော် virus ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုရဲ့ source code နဲ့ […]